हवाईजहाजको शौचालयको फोहोर कहाँ जान्छ ? – ramechhapkhabar.com
हवाईजहाजको शौचालयको फोहोर कहाँ जान्छ ?
हामीलाई कौतुहलता हुन्छ कि वास्तवमा जहाजको शौचालयको फोहोर कहाँ जान्छ होला । वास्तवमा हामी जुन जहाजमा उडीरहेका हुन्छौ उक्त जहाजमा ठुला ठुला ग्यालिनको ट्याँकी राखिएको हुन्छ ।
त्यही ट्यांकीमा सबै मलमुत्र जम्मा हुन्छ । पछिल्लो ३० वर्ष यता भने जहाजमा भ्याकुम शौचालय हुन्छ जहाँ तरल एकातिर र ठोस अर्कोतिर पठाउछ र ठोस मल जहाजको तल २०० लीटरको ट्यांकीमा बस्छ । यो २०० लिटरको ट्यांकी हरेक पटकको उडान पश्चातखुल्छ र खाली गरीन्छ । स्टेशनका कर्मचारीहरुले यसलाई सफा गर्ने गर्छन् ।
लाखौँ युवा हरु ज्यान जोगाउन देश छोडी सकेका कारण पनि सिरियामा युवाहरुको अनिकाल परेको हो ।युवाको कमि परेपछि युवतीहरु विवाहित पुरुषको साईली, माईली, कान्छी दुलही बन्न समेत तयार रहेका छन् । सिरियामा ७० प्रतिसत युवतीहरु त अविवाहित बस्न बाध्य भएको समाचार हरु बाहिरिएको छ । सिरियामा रहेको पुरुषको जति ओटी श्रीमती रहेपनि युवतीहरु विवाह गर्न लालायित हुने गर्दछन ।